Dinta: Otu esi achọta adreesị ozi-e kọntaktị B2B na sekọnd | Martech Zone
Enwere oge mgbe ịchọrọ naanị ịnweta adreesị ozi-e iji kpọtụrụ onye ọrụ ibe ị na-enweghị na akwụkwọ adreesị gị. Ọ na-eju m anya mgbe niile, dịka ọmụmaatụ, mmadụ ole nwere akaụntụ LinkedIn debanyere aha na a onye adreesị ozi ịntanetị. Anyị ejikọrọ, yabụ ana m ele ha anya, dobe ha email… wee nweta nzaghachi. Aga m aga n'ihu na ntanetị ozi niile n'ofe mgbasa ozi mgbasa ozi na nzaghachi bụ n'ikpeazụ… "Oh, anaghị m elele adreesị ozi-e ahụ." Doh!
Hunter: Chọta adreesị ozi-e ọkachamara
Otu ngwọta dị egwu ma dị mfe bụ Hunter. Kwa ụbọchị, Hunter na-eleta ọtụtụ nde ibe weebụ iji chọta data azụmaahịa nwere ike ime. Dị ka igwe nchọta, ha na-edobe ndepụta ndeksi niile nke webụ ma hazie data na-adịghị na nchekwa data ọ bụla ọzọ.
Hunter na-ahapụ gị ịchọta adreesị ozi-e ndị ọkachamara n'ime sekọnd wee jikọọ na ndị dị mkpa maka azụmahịa gị. Iji jiri Hunter, naanị tinye ngalaba gị wee pịa Chọta adreesị ozi-e.
Nsonaazụ a na-enye ụkpụrụ a na-ahụkarị maka adreesị ozi-e yana ọnụọgụ ebe esitere na adreesị ozi-e ahụ. Ị nwere ike ịpịrị isi mmalite wee hụ ebe na mgbe achọtara data ahụ:
Hunter na-enyere gị aka:
Chọọ aha - chọọ site na aha mbụ, aha ikpeazụ, ma ọ bụ na ngalaba ka ịhụ ma edepụtara adreesị ozi-e nke onye.
Nyochaa adreesị ozi-e – tinye email wee chọpụta ma ha kwenyere na ọ bara uru ma ọ bụ na ha ekwetaghị.
Chọta onye ode akwụkwọ - chọta adreesị ozi-e nke ndị edemede sitere na akụkọ ịntanetị.
Mgbasa ozi ọrịre dinta
Kọntaktị ọ bụla ị na-achọpụta na ya Hunter enwere ike ịgbakwunye na a ndepụta ndu ma ị nwere ike ibuga mkpọsa email oyi site na ijikọ Google Office ma ọ bụ akaụntụ email Microsoft gị. Ọ bụ ọmarịcha atụmatụ ebe ọ na-ezigara email site na ikpo okwu email gị. Ị nwere ike wuo ndebiri ahaziri iche na ya.
Ọ bụrụ na ị debanyere aha Hunter, ikpo okwu bụ n'efu na ihe ruru 25 ọchụchọ kwa ọnwa.
Chọta adreesị ozi-e ọkachamara
Ngosipụta: Abụ m mmekọ maka Hunter na m na-eji njikọ njikọ ha na edemede a.
Tags: b2bb2b adreesị emailwuo ndepụta email oyiewu listi emailwuo ndepụta nduemail oyiozi email dị jụụnyocha email ngalabaadreesị ozi ịntanetịngalaba adreesị ozi-endepụta emailnzisa ozi emailemail atụmanyachọta adreesị ozi-e odeechọta adreesị ozi-ehunterije ozigboadreesị ozi-e ọkachamarachọọ ngalaba maka adreesị ozi-enyochaa adreesị ozi-e